क्यानडामा हुन लागेको विश्व संस्कृत सम्मेलनमा जान लागेका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई शनिवार विमानस्थलबाट फर्काइएको घटनालाई लिएर नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । आइतवार राष्ट्रियसभाको बैठकमा कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले कोइरालालाई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उपकुलपतिमाथि भएको दुर्व्यवहारको सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोध भएको छ । शनिवार भएको घटनाका सम्बन्धमा उपकुलपति कोइरालासँग लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले टेलिफोनमा कुरा गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सार :
हिजो शनिवार विमानस्थलमा तपाईंमाथि के भएको हो ?
सन् २०२४ मा नेपालमा विश्व संस्कृत सम्मेलन गराउने अभियानका साथ वि.सं. २०७२ साल मंसिर महिनादेखि म लागेको थिएँ । त्यसबेला शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सचिवालय गठन र सम्मेलनका लागि ३५ लाख रुपैयाँ दिने सहमति गर्नुभयो । क्यानडाको ब्रिटिश–कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा १७औं संस्कृत विश्व सम्मेलन भइरहेको छ, त्यसमा सहभागी हुन शिक्षामन्त्रालयले सहमतिपत्र दिएको थियो ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले उपकुलपतिको नेतृत्वमा सातजना सहभागी गराउने निर्णय पास गरेको थियो । त्यसैअनुसार मैले १५ गते सहकुलपतिमार्फत कुलपतिलाई ऐननियमको व्यवस्था अनुसार सम्बोधन गरेर प्रवेशाज्ञा (भिसा)का लागि निवेदन दिएको थिएँ । त्यो प्रवेशाज्ञा पहिला प्रक्रियामा रहन्थ्यो, पछि स्वीकृत हुन्थ्यो । पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा त्यस्तै भएको थियो, त्यसैगरी म दुईपटक विदेश गएको थिएँ । यसपटक छिट्टै भयो ।
अहिले विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बहाना बखेडा गरेर मलाई छापामार शैलीमा विमानस्थलबाट प्रहरी लगाएर विना आरोप, बिना पक्राउपुर्जी एक प्रकारले पक्राउ नै गरेर बालुवाटारको एउटा कोठामा लगेर एक घण्टा राख्ने काम गर्नुभयो । विमान उडिसकेपछि बल्ल मलाई छाडियो । कुलपति (प्रधानमन्त्री) ले भेट्न खोज्नुभएको भनिएको थियो तर मलाई कुलपतिजीले भेट्नुभएन ।
अहिलेको सरकारको संस्कृतप्रतिको पूर्वनियोजित आक्रोश, एकेडमीप्रतिको आक्रमण र सर्वसत्तावादका लक्षणहरू एकसाथ प्रकट भएको मैले अनुभव गरेको छु ।
यो मेरो मात्र अपमान होइन, सम्पूर्ण प्राज्ञिक जगतकै अपमान हो । म व्यक्ति अपमानित हुँदा सिंगो प्राज्ञिक जगतका मानिस अपमानित भएका छन् यसबाट ।
विमानस्थलबाट बालुवाटार लगिएपछि के भयो ?
मलाई विदश जान रोक्ने नियत रैछ भन्ने मैले बुझें । मलाई केही आरोप लगाइएन । एउटा कोठामा राखेर छाडियो ।
विमानस्थलमा हाम्रो हाकिम साबले भेट्न खोज्नुभएको छ भनेर मलाई तीनजना प्रहरीले हाकिमतिर ल्याए । त्यहाँ मेरो कागजपत्र चेकजाँच हुँदै थियो । त्यहाँ कमल घर्ती भन्ने डीआईजी हुनुहुँदो रहेछ सिभिल ड्रेसमा । उहाँँले तपाईंलाई कुलपतिले भेटन खोज्नुभएको छ सर, गाडी तयार छ, म तपाईंलाई बालुवाटार पुर्‍याउँछु भन्नुभयो । हुन्छ भनेर म बालुवाटार गएँ । बालुवाटारमा लगेर मलाई एक घण्टा कोठामा राखियो । कुलपतिले बोलाएको भनेर लगियो तर मलाई भेट्नुभएन । एक घण्टापछि आज कुलपतिजी व्यस्त हुनुभयो, तपाईं अहिले घर जानुस् भनियो । म घर फर्कें । घरमा फर्किएपछि डीएसपी दिनेश भट्टले फोन गरेर सामान लिएर जान भन्नुभयो । सुरक्षित राख्नुभएको रहेछ, घर फर्काइदिनुभयो ।
किन यस्तो भयो जस्तो लाग्छ ?
हाम्रो नियुक्ति प्राज्ञिक प्रक्रियाबाट भएको हो । ऐन संशोधन नगरी हामीलाई हटाउन पनि सकिँदैन । २०७२ साल भाद्र ७ गते विश्वविद्यालयका चारजना उपकुलपतिहरूको नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारले गरेको हो । २०७६ साल भाद्र ६ गते हामी चार उपकुलपतिको कार्यकाल सकिन्छ । त्यसबेलामा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विधि र प्रक्रियाअनुसार नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ , त्यसभन्दा पहिले निकाल्ने हो भने ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।
तपार्इं कसैलाई निमित्त नदिई विदेश जान लाग्नुभएको भन्ने आरोप सुनियो नि !
निमित्तका लागि रेक्टरको नाममा पत्र ठीक पारेको थिएँ, आजबाट लागू हुनेगरी दिँदै थिए । मैले चिट्ठी ठिक्क पारेर इमेल गर्न लागेको थिएँ । मलाई रोकेपछि निमित्त दिनुपर्ने कुरो भएन, म देशभित्र छु । मैले सही गरेको थिएँ, मैले मेल गरेर पठाउथें ।
तपाईंप्रति भएको व्यवहारलाई कसरी लिनुभएको छ ?
विचारसँग असहमति राख्नेहरूलाई सताउने वर्तमान सरकारको पहिलो कदम हुनसक्छ । यस्तैगरी सताएपछि राजीनामा दिएर भागून् भन्ने उहाँहरूको चाहना हुनसक्छ । तर यो किमार्थ पूरा हुन सक्दैन किनभने लोकतन्त्र र जनताको अधिकारका लागि हामी जेल गयौं, उहाँहरू साम्यवादका लागि हिंसा गरेर सत्तामा आउनुभएको छ । हामीहरू अनेक विचारमा एकता खोज्छौं, उहाँहरू मान्छे काटेर एकता खोज्नुहुन्छ । यो द्वन्द्व अगाडि बढ्छ ।
विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई एउटा अपराधीलाई राज्यले जुन जस्तो शैलीमा नियन्त्रण गर्छ, त्यो शैलीमा नियन्त्रण गर्नु हुन्छ ? यस्तो त तानशाही व्यवस्थामा हुन्छ । पञ्चायतले पनि यस्तो गरेको थिएन । बीपीलाई विदेश जानबाट रोक्नका लागि किनेका मान्छे ल्याएर सुताएर रोकिएको थियो, त्यसपछि यस्तो भएको थिएन ।
मैले के गर्ने ? मेरा कुरा जनतासमक्ष पुर्‍याउँछु । जनताले जे आदेश दिन्छन्, त्यही गर्छु । तर राजीनामा गरेर भाग्दिनँ । म फेरि भन्छु, यस्तै सताएपछि राजीनामा दिएर भागून् भन्ने उहाँहरूको चाहना हो भने किमार्थ पूरा हुन सक्दैन ।
राजधानीमा दिउँसै लुटियो सुन पसल काठमाडौं- काठमाडौंको जोरपाटीस्थित भीमेश्वर सुनचाँदी पसलबाट अज्ञात समूहले पैसा लुटेर फरार भएका छन् । बुधवार दिउँसो ग्राहक बनेर आएका चार जनाको समूहले पसलको सटर लगाएर ८० हजार रुपैयाँ...
काखमा माकुरो आएपछि तर्सेकी महिलाले गाडी खसाइन् नदीमा